काठमाडौं । विभिन्न कार्यक्रम गरी काठमाडौंको शान्तिनगरमा रहेको बेविलोन नेशनल विद्यालयले आफनो स्थापनाको २३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्यालयले आँखा शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रिन्सिपल राजु राईले नेपाली बुलेटिनलाई बताए ।
उत्कृष्ट शिक्षण सिकाईका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपमा विद्यालयले बेलाबेलामा विभिन्न सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको छ । शनिवार विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 'जीवनको सार आँखाको बहार' भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको थियो । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरको सहयोगमा विद्यालयकै परिसरमा आँखा शिविर आयोजना गरिएको प्रिन्सिपल राई जानकारी दिएका छन् । शिविरिमा नेपाल आँखा अस्पतालका वरिष्ठ दृष्टि विशेषज्ञ डा. अरुणप्रसाद ढुंगानसहितको टोलीले विरामीको उपचार गरेका थिए ।
शिविरमा करिव ५ सय जनाको आँखा परिक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ६ जना मोति विन्दु, ५ जना जल विन्दु तथा अन्य विभिन्न समस्याका विरामी रहेको डा. ढुंगानाले जानकारी दिए । कार्यक्रममा विद्यालयकै स्काउट विद्यार्थीहरुले स्वयंसेवकका रुपमा काम गरेका थिए । शिक्षक-अभिभावक संघकी सदस्य मञ्जु बम्जनले कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक-शिक्षकाहरुले सहयोग गरेका थिए ।